Dhibaatada HIV-ga ee bukaanka London, talaabo udhow daaweyn - TELES RELAY
ACCUEIL » CAAFIMAADKA CUSUB • DARYEELKA CAAFIMAAD • Galmada iyo xiriirada 'Bukaanka London' 'cafimaadka HIV, talaabo u dhow daaweyn
'Bukaanka London' 'cafimaadka HIV, talaabo u dhow daaweyn
Teddy Oben 5 March 2019
Qofka labaad wuxuu ku jiraa iska-caabinta HIV-1, fayras keena AIDS-ka, daaweynta ka dib iyo loo maleynayo in la ogaado.
Toban sano ka dib markii kiiska ugu horeysay xaqiijiyay in qofka qaba cudurka HIV-ahaanshaha cad takhaluso cudurka dilaaga ah, nin baa laga ogyahay oo keliya sida "bukaanka London" ayaa muujisay calaamad u lahayn ee fayraska bilood ku dhow 19, Waxay warbixiyay weriyey Nature.
Labadaba bukaanjiifka ayaa la siiyay ilmo-galeenka lafaha si loogu daaweeyo kansarka dhiigga, oo qaada unugyada asaasiga ah ee isbeddelka hidde-wadaha oo ka hortagaya HIV-ga inuu qaado qaadashada.
"By la gaaro dembidhaafka in bukaanka labaad la isticmaalayo hab la mid ah, waxaan-ayaa muujiyay que la Berlin bukaanka yaab leh ma ahayn," ayuu yiri qoraaga hogaanka Ravindra Gupta, borofisar ka tirsan jaamacadda Cambridge, tilmaamayaa in daawo ugu horeysay yaqaano functional.
Malaayiin qof ayaa qaba HIV-ga adduunka oo dhan isha ku hay daawada loo yaqaan 'antiretroviral therapy' (ARV), laakiin daaweyntu ma aha inay dadka bukaanka ku ridaan.
"Waqtigan xaadirka ah, habka kaliya ee lagu daaweyn karo HIV waa daawooyin ay xakameynayaan fayraska, taas oo dadku u baahan yihiin inay daryeelaan noloshooda oo dhan," Ayuu yiri Gupta.
"Tani waxay keenaysaa caqabad gaar ah oo ka jirta waddamada soo koraya," oo aan weli helin daaweyn ku filan, ayuu raaciyay.
Ku dhowaad 37 million qof ayaa la nool HIV-ga caalamka, laakiin keliya boqolkiiba 59 ayaa qaata ARV. Ku dhowaad hal malyan oo qof ayaa sanad kasta u dhintaan sababaha la xiriira HIV.
Nooc cusub oo mukhadaraad u leh HIV-ga ayaa welwel sii kordhaya.
Gupta iyo kooxdiisa ayaa xooga saaray in dhuuxa lafdhaqaaqa laf dhabarka ah - qaab khatar ah oo xanuun leh - maaha doorasho daaweyn HIV ah.
Tusaale labaad oo laga yareeyo oo laga yaabo inuu daawo u yeesho ka dib marka sidan oo kale ku tallaali doono ayaa ka caawin doonta saynisyahannada in ay yareeyaan xeeladaha kala duwan ee daaweynta, isaga iyo qaar kaleba.
- 'Daawo waa suurtagal' '-
"Kiiska labaad wuxuu xoojinayaa fikirka ah in daaweyntu ay suurtogal tahay," Sharon R Lewin oo ah Agaasimaha Peter Doherty Institute for Infect and Response iyo Jaamacadda Melbourne, ayaa AFP u sheegay.
"Waxaan isku dayi karnaa in aan ka dhigno qayb ka mid ah xubinta taranka laga yaabo inuu isbeddel sameeyo halkan, oo u ogolow inuu ninkan joojiyo daawooyinka anti-fayrasku."
Bukaanada London iyo Berlin labadaba waxay qaateen unugyada unugyada unugyada unugyada HIV-ga, kuwaas oo loo yaqaan CCR5.
"Helitaanka hab lagu baabi'iyo fayraska waa mudnaan caalami ah oo caalami ah, laakiin si gaar ah ayey u adag tahay sababta oo ah fayrasku wuxuu isku xiraa unugyada dhiigga cad ee martigelinta," ayuu yiri Gupta.
Daraasadu waxay qeexaysaa bukaanka qarsoodiga ah ee Britishka ah ee laga helay cudurka caabuqa HIV-ga iyo inuu daaweynta dabiiciga ah ka helay tan iyo 2003.
Sannadkii hore, waxaa lagu ogaadey Hodgkin's Lymphoma, oo ah kansar halis ah.
Waxa uu ku dhacay xubin ka mid ah unugyada dheef-shiid kiimikaadoodka ah ee dhirta 'breeding' kaas oo ku jira noocyo kala duwan oo kala duwan oo dadweynaha ah.
CCR5 waa daaweeynta ugu badan ee loo isticmaalo HIV-1.
Dadka haysta laba nuqul oo ka mid ah CCR5 waxay u adkeysanayaan HIV-1 noocyada badan ee fayrasyada, waxay ka careysiisaa fayruska 'isku dayga lagu galo unugyada martida.
Kansarka, kiimoteraabigu wuxuu waxtar u yeelan karaa HIV maxaa yeelay waxay dileysaa unugyada kala qaybsan.
Laakiin bedelida unugyada difaaca jirka ee la mid ah kuwa soo-dhaweeyaha HIV ayaa u muuqda inay muhiim u yihiin ka-hortagga HIV-ga ee dib-u-dhiska ka dib daaweynta ka dib.
Ka dib markii loo bedelay dhuuxa lafta, bukaanku wuxuu ku sugnaa ARV ee bilaha 16, taas oo durbadiiba daaweynta ARV la joojiyay.
Baaritaanno joogto ah ayaa xaqiijiyay in galka fayruska ee bukaan-socodka aan wali la garan karin tan iyo markaas.
Timothy Brown, ee "Berlin bukaanka", waxaa la siiyey laba-tallaalidda iyo maray total cindiga jirka si loo daaweeyo kansarka, halka bukaanka British heshay hal xubin oo chemotherapy degdeg ah ka yar.
"Ma aanan dooneynin inaan kaligiis kaligiis ahaado HIV," Brown ayaa ku qoray joornaal caafimaad oo ku taal 2015, isaga oo sharxaya sababta uu u go'aansaday inuu muujiyo aqoonsigiisa.
"Waxaan rabaa in aan nafteyda u huro si aan u caawiyo cilmi baarista daaweynta ama daaweynta HIV."
Kooxda cilmi baarista ee bukaanka London waxay soo bandhigayaan natiijooyinkooda Shirka Annual ee Retroviruses iyo Caabuqyada Fursadaha (CROI) ee Seattle, Washington.
Khamriga, tubaakada: Siyaabaha 10 ee kali ah
Mars Bleu: fiidiyoow la garaaco si loo ogaado kansarka mindhicirka